नेपाल-भारत वार्ता श्रृंखला: सीमा समस्या समाधान हुने सम्भावना कति ? - आजकोNepal
नेपाल-भारत वार्ता श्रृंखला: सीमा समस्या समाधान हुने सम्भावना कति ?
संवाददाता २७ कार्तिक २०७७, 2:23 pm
कार्तिक २७, काठमाडौँ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको नेपालको भुमिलाइ समेटेर भारतले गत नोभेम्बेरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारि गर्यो। त्यसपछि बल्झिएको सीमा विवादका कारण नेपाल र भारत बीच कुटनीतिक स्थरमा वार्ता लगभग सुन्य भयो। सीमा विवाद चर्किएको एक वर्षपछि दुई देश बीच औपचारिक संवादको श्रृंखला शुरु भएको छ। भेटघाटहरु बाक्लिएका छन्।
कुटनीतिक विश्लेषकहरुको शब्दमा भन्ने हो भने अहिले नेपाल र भारत दुबैले एक अर्काको नाडी छाम्नी प्रयास गर्दै छन्। यसको सुरुवात नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेलिफोन मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाइ स्वतन्त्रता दिवसको सुभकामना दिनबाट सुरु भयो । त्यसयता दुई सुरक्षा निकाय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र स्थल सेनाका प्रमुख एमएम नरवणेलाइ स्वागत गरिसकेको छ।
‘रअ’ प्रमुख गोयलको अप्रत्यासित नेपाल भ्रमणले सरकारको कुटनीति प्रति प्रश्न मात्र होइन नियत माथि नै प्रश्न चिन्न खडा गरेको थियो भने सेना प्रमुख नरवणेको भ्रमणबाट नेपालले भारतको मनास्तिथि बुझ्न महत्वपूर्ण हुने बुझेको थियो।
अब भने दुवै देश सम्भवतः यहि नोभेम्बर २६ र २७ हुने भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण र सचिव स्तरीय वार्ताको तयारीमा जुटेका छन्। यस अघि सीमा विवादका कारण उब्जिएको असमझदारी हटाउन नेपालले भारतसंग सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएको भएपनि भारतले आलटाल गर्दै आइरहेको थियो।
सचिव स्तरीय वार्ता लगत्तै पररास्ट्रमन्त्रि परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको बैठकका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रमसमेत रहेको पररास्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दुवैस्तरको भेटवार्तामा सीमा विवाद र असझदारीको विषयमा पनि कुरा हुने बताइएको छ। “परराष्ट्रमन्त्री स्तरको वार्तामा नेपालले कालापानी लगाएतको विषय पनि उठाउने तयारि भएको” मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले “कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायत क्षेत्रको विषय छिटो टुंग्याउन नेपालले विशेष पहल गर्ने ” बताए।
वार्ताको नतिजा कस्तो आउला ?
नेपालको लागि यि सबै वार्ताहरुमा प्रमुख चासोको विषय भारतीय कब्जामा रहेको नेपालि भुमि कालापानी लगायतको क्षेत्र नै हुने पररास्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउछन्। पुर्व राजदुत भरतराज गाहका अनुसार “नेपालले अहिले सीमा समस्या सुल्झाउन सहज वातावरण तयार पार्ने रणनीति लिएको छ ।” तर उनले यो नेपाल एक्लैले मात्र चाहेर नहुने बाताउछन।
“भारत वार्तामा त बस्ला तर नेपाललाइ कालापानी यति सझिलै दिने सम्भावना तत्काल कम छ” गाहाले भने । यस्तै भारतको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिंक टयाङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानमा नेपाल–भारत मामिलासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने डा. निहार आर नायकले भारतको अहिलेको प्रमुख रणनीति भनेको नेपाल-भारत कुटनीतिक सम्बन्ध झन् कसिलो बनाउने रहेको बताए ।
उनले भने “दुई देशका वीचमा अब हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणको समयमा सिमासम्बन्धी विषयमा समेत कुराकानी त हुने तर सीमा सम्बन्धि समस्याको समाधानको लागि पहिला त्यस्तै विस्वासिलो सम्बन्धको खाचो भारतले चाहेको छ।”
विश्लेषकहरु पनि वार्ताको सुरुवात हुदैमा मात्र सीमा समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर बुझ्न नमिल्ने बताउछन । विश्लेषक डा. अमृतमान श्रेष्ठले दुवै देश आ-आफ्नै अडानमा यथावत भएको हुदा तत्काल समस्या समाधान भइहाल्छ भन्न नसकिने बताए । उनले “तर यस्तो उच्च स्तरीय भेटवार्ताले समस्या समाधानको लागी मार्गचित्र बनाउन सहयोग पुर्याउने आफु विस्वस्त रहेको बताए।
कालापानी वार्ताको शृंखला
कालापानीको विवाद सुरु भएदेखि हालसम्म नेपाल र भारत बीच धेरैपटक वार्ता भइसकेको पररास्ट्र मन्त्रालयका पुर्व अधिकारिहरु बताउछन। उनिहरुका अनुसार विवाद समाधानको लागि पहल गर्न कहिले बाट सुरु भएको यकिन छैन। तर सन् १९९७ मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री आइ.के गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउदा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संगको वार्ताका क्रममा नेपालले कालापानी विवाद समाधानको औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।
दुवै प्रधानमन्त्रिको वार्तापछी जारि संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको वुदा नम्बर ९ मा कालापानी विवाद यथासिघ्र समाधान गरिने उल्लेख छ। तर तत्कालिन अवस्थामा नेपालको दावी कालापानी मात्र थियो । नेपाललाइ तेतिखेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत नेपालको सीमाभित्र पर्ने कुरा थाहा नभएको हुन सक्ने इतिहासकारहरु बताउछन।
त्यसएता नेपालमा लगभग हरेक सरकारको पालामा कालापानीको विषयमा वार्ताको लागि नेपालले पहल गरे पनि भारतले अनेक बहाना बनाएर टाल्ने गरेको कुटनितिज्ञहरु बताउने गर्छन । पछिल्लो समय सन् २०१४ मा भारत र चिन बीच लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति हुदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध स्वरूप कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । पछी नेपालले भारतलाई वार्ताको लागि प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
अब समाधानको बाटो कि औपचारिकता मात्र ?
सन् १९९७ देखि भारत संग कालापानी लगायत सीमा विवादको विषयमा निर्णायक वार्ता हुन नसक्नुको तितो यथार्थ छ । नेपालमा बदलिदो व्यवस्था र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको कारण पनि नेपालले ठोस् प्रस्ताव गर्न नसकेको नेताहरु स्विकार्छन ।
तर अहिले भने नेपालमा स्थिर सरकार आएको छ । नेपालसंग अहिले आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको छन् । यस्तै सीमा विवादको विषयमा वार्ता गर्न विज्ञहरुको टोलि समेत गठन गरिसकेको पररास्ट्र मन्त्रालय बताउछ । नेपालको लागि सीमा विवाद हाल गर्न यो नै उपयुक्त समय रहेको विज्ञहरु बताउछन ।
तर नेपाललाई डर अझै पनि भारतीय रवैयाको रहेको कुटनीतिक जानकारहरु बताउछन । भारतले आगामी उच्च स्तरीय वार्तालाइ पनि औपचारिकतामा मात्र सिमित राख्न सक्ने उनीहरुको डर छ । यसप्रति सजक हुन सरकारलाइ उनीहरु सुझाउछन् ।